A video clip (nkiri) nwere ike kewaa, jikọtara ndị ọzọ faịlụ ime ka ndị ọzọ gh faịlụ. Kewara a mere, ihe atụ ịgbakwunye a ukpụhọde ke n'etiti mbụ clip. Clipping a nkiri na-enyere ndị nchịkọta akụkọ akara a clip si mmalite na ọgwụgwụ ebe.
Part 1: Olee gbawaa clip na iMovie on Mac
Part 2: Olee gbawaa clip na iMovie on iPhone / iPad
Nkebi nke 3: Olee otú iji kewaa a clip on Windows iji Wondershare Video Converter Ultimate
Mejuputa kewara nke mkpachị iMovie na-eji ihe ọzọ mma a na-akpọ nkenke Editor. Lee ndị nzọụkwụ gbawaa clip na iMovie na iji nkenke Editor.
Mbubata clip site na ịpị ibubata media bọtịnụ.
Họrọ isi iyi Obere vidiyo.
Pịa na Import All dị ka e gosiri esereese n'elu.
Ewepụtụ Obere vidiyo.
Tinye a obosara ogbugba iji usoro iheomume.
Ewepụtụ atọ sekọnd si ọgwụgwụ nke na mbara ogbugba.
Ewepụtụ 3.9 sekọnd site na mmalite nke nso-elu.
Iji nọgide na-ngagharị continuity click on Ohere> Gosi nkenke Editor.
Mgbe ahụ ịdọrọ mkpachị dị otú ahụ n'ụzọ ka jikota ha nkịtị edinam.
Mgbe ahụ n'ikpeazụ kpatụ mgbanwe n'ụzọ iji chebe continuity, ma bee ihe mbụ edinam.
WepuÚ nkenke Editor.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji nkenke Editor on iMovie na-achọ nanị kewaa clip dị nnọọ ka na, na-eso nzọụkwụ dị ka e n'okpuru.
Kewaa nna ukwu clip abụọ Ebeonodu.
Akuku na ahịhịa akụkụ nke footage a na-agaghị eji.
Efu nke ahịhịa.
Mgbe ahụ nyegharịa fọdụrụ Obere vidiyo.
Mgbe ahụ n'ikpeazụ kpatụ mgbanwe na jikota abụọ mkpachị seamlessly.
Anyị na-eji a ọzọ ngwa (ebughibu) na-egosi na usoro.
Ịgbakwunye videos ka video slimmer.
Enweta na kwukwara mkpachị ịgwa a mkpụbelata window.
Pịa mmịfe na ịdọrọ ya mmalite ebe.
Pịa Malite bọtịnụ gosi ya na unu nhọrọ.
Ịdọrọ ihe mmịfe na njedebe ebe.
Ugbu a pịa mere bọtịnụ na n'elu nri akuku wepuÚ.
N'ikpeazụ, enweta ebughibu Ugbu a.
The mkpachị ga-ebipụ on iPad na iji ebughibu App.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ ihe magburu onwe video akakabarede ngwá ọrụ na a kpọrọ nke elu ọgwụgwụ atụmatụ na ọrụ. The akụkụ kasị mma bụ na ọ na-akwado ihe ọ video format na i nwere ike na-eche nke ma na-eme ihe ọ bụla dị gị mkpa dị nnọọ ole na ole clicks. Tinye ka na 30x ngwa ngwa video akakabarede na-eme ka ndụ gị nke ukwuu mfe, ị ga-ahụ na a na ịba uru software bụ ngọzi ma ọ bụrụ na ị bụ n'ezie n'ime-arụ ọrụ na videos oge niile.
Na-esonụ bụ isi atụmatụ Wondershare Video Converter Ultimate. o
Tọghata DVD maka ojiji nkeonwe
Tọghata videos site na otu usoro ọzọ, gụnyere 3D
Nyefee converted na ebudatara video n'elu WiFi
Dezie videos na tinye mmetụta tupu converting / ere ha
Download vidiyo si na online gụgharia saịtị dị ka YouTube na ndị ọzọ
Ya mere, ọ bụrụ na ị dị njikere na-agbalị ya ugbu a, ị ga-ibudata Wondershare Video Converter Ultimate si ebe a. Ozugbo i mere na, na-eso ndị a iji kewaa ọ bụla clip / video on Windows iji Wondershare Video Converter Ultimate.
Ẹkedori Wondershare Video Ntụgharị si omume menu.
Pịa na tinye faịlụ Ibu Ibu mkpachị ka media n'ọbá akwụkwọ.
Họrọ faịlụ site na kọmputa (Nhọrọ, ikpuru na dobe faịlụ) na usoro iheomume.
Kewaa mkpachị site na ịpị edit si dapụtara nri click menu.
Ndị na-esonụ na windo na mkpụbelata nhọrọ ga-apụta.
Pịa na OK bọtịnụ iji nweta gị nke kewara window.
Pịa na tọghata na-amalite kewara usoro.
[Sloved] Olee otú mbubata mts ka iMovie
> Resource> iMovie> Olee otú iji kewaa a clip on Mac / iPhone / iPad